Matt Nettleton Zvinyorwa pa Martech Zone |
Zvinyorwa na Matt Nettleton
Nei maColts achienda kuKudzidzisa Kamba? Havatomboziva kutamba bhora here? Musi waChikunguru 30 wegore rino maColts achaenda kuTraining Camp, izvi zvicharatidza kutanga kwevhiki ina yekudzidzira kwakasimba kwakagadzirirwa kumanikidza vatambi kuti vatarise pane zvavanofanira kuita kusimudzira kugona kwavo kutamba nhabvu. Asi zvinoita sekutambisa nguva kwandiri, mushure mezvose
Semudzidzisi wekutengesa ini ndinoshanda nemakambani mune akasiyana maindasitiri. Uye dzinenge dzose kambani dzandinoshanda nadzo dziri kushandisa yakawanda gore rino kupfuura yekupedzisira pane internet yakanangidzirwa kushambadzira, kusanganisira vezvenhau. Nehurombo kune mazhinji emakambani aya, yavo yepamhepo kushambadzira iri kutanga kushanda uye ivo vari kuwana mafoni uye maemail kubva kune vanokurudzira vatengi vakawana nekuvatevera pa internet. Asi ivo vari kucherechedza kunetsa maitiro, kushambadzira
Kukura kwangu ndakarerwa neanotarisira uye asina tariro, Amai vangu vangangodaro vaive munhu anofara kupfuura vese shamwari yaunogona kusangana navo. Akave nechokwadi chekuti ndakamutswa nepfungwa dzakawanda, ndisingade chero chinhu chakanaka kune wese munhu uye ndichiita zvese zvandinogona kubatsira vanhu kubuda. Pandakatanga kudzidza nekukura ndakamubvunza nezvekuti sei aibatsira vamwe vanhu vaaisada uye mhinduro yake yaive
Chitatu, November 18, 2009 Svondo, Gunyana 8, 2013 Matt Nettleton
Masikati ano ndakabvunzurudza Matt Nettleton. Matt anodzidzisa zvekutengesa mudzidzisi uye wangu wega wekutengesa murairidzi muno muIndipolis. Basa raakapedza kusvika parizvino rakachinja maitiro (akaipa) ekutengesa uye nekukudza hunyanzvi hwangu hwekutengesa. Kutengesa kwakanyanya kuomarara kupfuura zvawaimboita… panguva iyo vanhu vari kufonera yako yekutengesa timu, ivo vane ruzivo rwakanyanya. Ini ndinotenda zvakakonzera shanduko hombe muhurongwa uko